अमेजन ब्रिटेन विक्रेता केन्द्रिय काम कसरी गर्छ?
हाम्रा अघिल्लो पोष्टहरूमा, हामीले अमेजन बिक्रेता सेन्ट्रल र अमेजन विक्रेता मध्य बीचको भिन्नताबारे लेखेका छौं। यो जानकारी तपाईले हाम्रो अर्ल्टर प्रश्नहरू र जवाफ सेक्सन मा पाउन सक्नुहुनेछ। यो पोष्ट हामीले अमेजन यूके विक्रेता विक्रेताको विषयमा समर्पित गर्ने निर्णय गर्नुभयो। हामी यस अमेजन मार्केटिंग कार्यक्रम को सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष को बारे मा कुरा गर्न को लागी जाँदैछन र तपाईंको विपणन अभियान को सही ढंग देखि विकसित गर्न मा मदद गर्न को लागि अमेजन विक्रेता केन्द्र संग तुलना गर्नुहोस।
आउनुहोस् पहिल्यै अमेजन विक्रेता केन्द्रीयको आधारभूत विवरणहरू याद गर्नुहोस्।
अमेजन यूके विक्रेता विक्रेता
ती व्यापारी जो प्रति एक एकाइ एकाइ भन्दा अधिक बेचन छैन, जान्दछन् कि विक्रेता केन्द्रीय एक महत्वपूर्ण भाग हो सञ्चालनले उनीहरूको उपभोक्ता डेटा र मूल्य निर्धारण नीति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो कार्यक्रम प्रयोग गर्दै, तपाईंले अन्य च्यानल साझेदारहरूको लागि स्थापित रिटेल मूल्य निर्धारण को लागी एकदम राम्रो मौका पाउँदछ। तथापि, अमेजन यूके विक्रेता केन्द्रीय तपाईंलाई सीमित विज्ञापन विकल्प प्रदान गर्दछ र उच्च पूर्ति मूल्य को शुल्क प्रदान गर्दछ। यो कार्यक्रम केवल व्यक्तिगत र तेस्रो पक्ष बिक्रेताहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ।
जबकि विक्रेता केन्द्रीय निर्माताहरु र वितरकों को लागि बेहतर उपयुक्त छ, जो उत्पादनहरु को एकदम मात्रा मा एक पल्ट बेचते हो। यो पहिलो पक्षका विक्रेताहरू अमेजनमा प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताहरूको रूपमा कार्य गर्छन्। यसको अवधिमा, अमेजनले यी ब्रान्डहरूको हेरचाह गर्छन् र तिनीहरूलाई बलियो सुरक्षा प्रदान गर्दछ। अमेजन पार्टनर बन्नको लागी, तपाईंलाई एक विशेष निमन्त्रणा प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यसको मतलब यो हो कि एक कार्यक्रम सबैको लागी होइन। यदि तपाईं एक अमेजन व्यापारिक साझेदार हुनुभयो भने, यसले आफ्नो सामानलाई उच्च मूल्यमा व्यक्तित्वहरूमा बेच्न र त्यसपछि केही लाभ तिर्न सक्नेछ। त्यसैले, अमेजन यूके विक्रेता विक्रेता प्रयोग गरेर, तपाईंलाई अमेजनबाट ग्यारेन्टी बिक्री प्राप्त हुन्छ, पूर्ण व्यापारिक सुरक्षा, विज्ञापन अवसरों, निश्चित लगानी विकल्पहरू र A + सामग्री फाइदाहरू। यद्यपि, साथमा स्पष्ट फाईलहरू छन्, त्यहाँ दुईवटा दुर्व्यवहारहरू छन्। सबैभन्दा पहिला, तपाईंको मूल्य निर्धारण नीति र ग्राहकहरूको डाटा अन्तर्गत नियन्त्रण सीमित छ। आन्तरिक डेटाको आधारमा अमेजनले कुनै पनि समय खुदरा मूल्य निर्धारण समायोजन गर्न सक्छ। यसबाहेक, अमेजनले खरीद अर्डर भर्नका लागि कठोर आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ। यसको अर्थ हो कि विक्रेताहरूले स्टक अर्डर पूरा गर्न कोसिस गर्ने प्रयास महत्वपूर्ण चार्जब्याक भुक्तानी गर्नु पर्छ।
विक्रेता एक्सप्रेस केहि मतभेदहरु संग विक्रेता केन्द्र को लगभग लगभग त्यहि काम गर्दछ। यो कार्यक्रम प्रयोग गरेर, तपाईं अमेजनमा ड्रप-शिपिंगमा भाग लिन अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले सोच्नुहुन्छ कि यसले तपाईंको व्यापारलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ। तपाईं अमेजन यूके भिन्डोर सेन्ट्रलमा निमन्त्रणाको लागी बेवास्ता नगरी तपाईंको उत्पादन अमेजनमा थोक उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमको तन्त्रणाको अनुसार, अमेजनले तपाईबाट बल्क अर्डर खरिद गर्नेछ र त्यसपछि ग्राहकहरूलाई सिधै ग्राहकहरूलाई बेच्दछ। यो भन्दा राम्रो भाग हो कि अमेजन सबै ग्राहक सेवा पहलुहरु को उत्तरदायी हुनेछ। तपाईं आफ्नो अमेजन भुक्तानीहरू 90 दिन भित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, विक्रेता मध्य केन्द्रको लागि 60-90 र अमेजन बिक्रेता केन्द्रीयका लागि धेरै हप्ताको तुलनामा।
तपाईंलाई जागरूक हुनुपर्दछ कि तपाई केवल अमेजनको रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, यो कार्यक्रम प्रयोग गर्दै, तपाइँसँग चीजहरूको लागि अमेजन बेल र विज्ञापन जस्तै पहुँच छैन।
. Source - best australian bush hats